Clublọ Ọrụ Azụmaahịa - Mụta azụmahịa 2
Clublọ Ahịa Review
N / A kacha nta ego
Nyocha 2020 zuru ezu nke miri emi nke Business Club
kacha nta ego N / A
Ndị Ahịa US
Akaụntụ Nchịkwa efu
trading Platform obere akpa
Onu ogugu 0
Ofdị Akụ cryptocurrencies
Clublọ Ọrụ Azụmaahịa bụ ụlọ ọrụ fintech ewepụtara na nso nso a nke mepụtara ngwa ọrụ pụrụ iche nke na-enyere ndị azụmaahịa aka inweta ọtụtụ. Companylọ ọrụ ahụ emepụtala nke ya cryptocurrency, obere akpa, mgbanwe, na kaadị akwụ ụgwọ. Ngwaahịa na ọrụ ndị a niile emeela usoro okike pụrụ iche nke ga - enyere ụlọ ọrụ na ndị mmadụ aka imekwu nke ọma. Ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ amalitela kemgbe afọ abụọ.
Uru Ego Azụmaahịa na ọghọm
Amalitere site na ndị ọkachamara nwere ọtụtụ iri afọ nke ahụmịhe na ngalaba ego.
Onye nchịkwa ego Malta na-achịkwa ya.
Mfe iji gam akporo na iOS ngwa
Ndị ọrụ ọrụ ahịa raara onwe ha nye.
Wuru na nche n'uche.
Ego pere mpe iji ikpo okwu.
Enwere ike ime ka weebụsaịtị we ka mma.
Otu ụlọ ọrụ na-eto eto nke anwalebeghị n'ọtụtụ buru ibu.
Ọnụahịa nke BCT ga-aga n'ihu na-agbanwe.
Ọ naghị anabata ego fiat
Ozi Clublọ Ahịa azụmahịa
A gam akporo ngwa: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activewallet.business.club
Kedu Ngwa A na-enye site na Clublọ Ọrụ Azụmaahịa
Azụmaahịa Club Token
Ejirila teknụzụ nke blockcheni wuo Clublọ Ọrụ Azụmaahịa. Dị ka aha ahụ na-egosi, ọ bụ teknụzụ nke na-enye ohere iji ihe mgbochi dị iche iche jikọtara ibe ha. Otu ngọngọ nwere usoro ndebiri oge nke data na-agbanwe agbanwe. Ihe omuma a adighi n'okpuru njikwa nke onye obula. Kama nke ahụ, ndị ọrụ niile na-achịkwa data ahụ na enweghị ike ịgbanwe. A maara nke ọma na teknụzụ blockcheni maka ọrụ ya na Bitcoin na cryptocurrencies ndị ọzọ. The Business Club Token (BCT) bụ akụkụ dị mkpa nke Business Club Ecosystem. Ọ bụ isi ya na-ejikọ ndị otu klọb. Ihe akara aka, nke echekwara na Business Club Active Wallet nwere ezigbo ikike ịzụrụ nke ego ndị ọzọ nwere. Ego ahụ na-agbanwekwa aka n'ime usoro okike.
Ego obere ego nke Business Business
Otu Business Club Wallet bụ obere akpa dijitalụ nke na-enye ndị otu na ndị jidere Business Club Token ohere ịchekwa ego ha. Ego obere akpa, nke dị na weebụ, gam akporo, na nsụgharị iOS ka e wuru iji jide n'aka na akara niile dị mma ma merụọ ahụ. Ndị otu nọ n'okirikiri ahụ nwere ike iji akara BCT na obere akpa ha gaa zụọ ahịa. Ha nwekwara ike soro ndi otu ozo keta oke tokens ahu.
Clublọ Ahịa Ego Blockchain (BCB)
Emepụtara Cryptocurrencies site na iji teknụzụ blockchain. Clublọ ọrụ azụmahịa Blockchain (BCB) bụ teknụzụ nke na-eme ka mmepe nke Business Club Tokens nwee ike mmepe. Na mkpokọta, naanị 720 nde BCT tokens ka a ga-eke. Mgbe onu ogugu a ruru, teknụzụ nke Business Club Blockchain ga akwusi imeputa otutu ihe ngosi. BCT ọ bụla ga-aba $ 1. Nke a ga - eduga na mmụba na ọnụahịa nke BCT Tokens dị ka ọkọnọ na - agbanye ala mgbe ọchịchọ na - abawanye.
Kaadị Azụmaahịa Ego Ego
Clublọ Ọrụ Azụlitewo akwugo ugwo nke na-enyere aka ijikwa ego na obere akpa ọrụ. E nwere kaadị ise akwụ ụgwọ nke Visa. Kaadị ndị a bụ:
Oghere Black Black - Nke a bụ kaadị kredit kachasị akwụ ụgwọ site na BCT Club. O nwere osisi BCT nke 50,000 BCT, 5% cashback, nkwụsị ndọrọ ego ATM nke $ 2,500, yana oke kaadị kaadị nke $ 50,000.
Pearl White Metal - Nke a bụ kaadị nke nwere osisi BCT nke 25,000 BCT, 4% cashback, nkwụsị ndọrọ ego nke ATM nke $ 2,500, yana ego kachasị nke $ 25,000.
Ọla edo di ocha - Nke a bu kaadi akwugo ugwo nwere oke nke 5,000 BCT, 3% cashback, onodu ego ATM nke $ 1,000, na oke ugwo nke $ 20,000.
Royal Blue Plastic - Kaadị a nwere osisi BCT nke 1,000 BCT, 2% cashback, nkwụsị ndọrọ ego ATM nke $ 1,000, yana oke nguzo nke $ 15,000.
Leaf Green Plastic - Nke a bụ kaadị akwụmụgwọ nwere 1% cashback, nkwụsị ndọrọ ego ATM nke $ 250, yana oke nguzo nke $ 15,000
Clubgwé ojii Club Cloud
Cloudgwé ojii kọwaa ihe dị mkpa nke otu azụmahịa si agba ọsọ. Ọ bụ ezigbo ihe nlere anya iji hụ na arụmọrụ na-akwụ ụgwọ ahịa azụmaahịa. Clublọ ọrụ azụmahịa azụlitewo ọrụ igwe ojii na-arụ ọrụ nke na-enye ndị ọrụ ohere ịchekwaa akwụkwọ na faịlụ. Ndị ọrụ nwere ike ịchekwa ihe ruru data terabyte nke 2.
Clublọ ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze
Business Club Social Network bụ ngwaahịa n'ime azụmaahịa azụmaahịa Club Club nke na-enye ndị ọrụ ohere ikwukọrịta, kesaa data, kpọsaa azụmahịa ha, ma zụta ọtụtụ ihe. Enwere ike mezue azụmahịa ndị a niile site na iji akara BCT.
Mgbanwe Clublọ Azụmaahịa
Azụmaahịa Club Club bụ ngwaahịa a na-atụ anya na a ga-ebido na 2019. Ngwaahịa a ga - eme ka ndị ji BCT Tokens nweta ma zụta akara BCT.
Otu esi esonye na ulo ahia
Nzọụkwụ mbụ ịbanye na Business Club bụ ịga na weebụsaịtị. N’akụkụ aka nri nke ebe obibi, ị ga-ahụ bọtịnụ ntinye aka. Soro bọtịnụ ahụ ma ọ ga-akpọrọ gị gaa na peeji na-esote ebe ị kwesiri itinye nkọwa gị. Gbaa mbọ hụ na itinye nkọwa zuru oke. Ọzọkwa, hụ na ị gụrụ usoro na ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ dị na mmalite ụbọchị, ịkwesịrị ịnwe nọmba njirimara maka ịga n'ihu. Then ga-ahụ nyochaa adreesị email gị site na ịpị njikọ ezitere gị.
Etu esi abanye n’ime ulo ahia
Na homepage, e nwere ihe ịrịba ama na bọtịnụ n'akụkụ elu. Ikwesiri itinye adreesị email gị ma ọ bụ aha njirimara na paswọọdụ iji gaa n'ihu. Kwesịrị ịtụle ịgbalite usoro nyocha usoro abụọ iji gaa n'ihu. N'aka ozo, inwere ike nbanye site na iji android ngwa mkpanaaka. Companylọ ọrụ ahụ amalitebeghị ngwa iOS nke ngwa ahụ.
Nkwenye Akaụntụ Azụmaahịa
Dị ka ngwaahịa ngwaahịa niile, ọ dị mkpa ka enyocha gị. Nkwenye na-enyere aka igosipụta njirimara nke ndị ọrụ. Iwu chọkwara ya. Get nweta nkwenye gị gosipụtara site na ịpị njikọ ma ọ bụ bọtịnụ ezitere gị. Mgbe ị debanyere aha, a ga-achọ ka ị zite foto nke ụbọchị gị na akwụkwọ njirimara.
Clublọ Ọrụ A Na-achịkwa Iwu?
Business Club na-achịkwa Maltese Financial Services Authority (MFSA). MFSA bụ otu n'ime ndị na-ahụ maka njikwa ego na European Union. N'agbanyeghị nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ egosighi ma ọ nwere ọfịs na Malta ma ọ bụ na ọ bụghị.
Kedu ụgwọ ndị a na-akwụ ụgwọ site na Clublọ Ọrụ Azụmaahịa?
Clublọ ọrụ azụmahịa na-ebo ebubo ntakịrị ebubo na azụmahịa emere n'ime netwọkụ. Ego obere ego na-arụ ọrụ n'etiti 0.3% na 0.4% site na akaụntụ gị kwa ụbọchị. Companylọ ọrụ ahụ nwere oge 'nro' nke ụbọchị 45 maka ego ndị ahịa na-edebe. Nke a pụtara na ụlọ ọrụ ahụ ga-akwụ gị 15% nke ego ị debere ma ọ bụrụ na ị kpebie ịdọrọ n'oge ụbọchị a dị nro. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na-ebokwa ọrụ nke 0.25% na azụmahịa niile emere na gburugburu ebe obibi.
Ndị otu nọ n'okirikiri nwere ike ịme ego site na ịkọwa ndị ọzọ nọ na ụlọ ọrụ ahụ. Kọmitii a dabere na ego ndị ahịa edepụtara na-edebe na gburugburu ebe obibi.
Ego anabatala site na Clublọ Ọrụ Azụmaahịa
Clublọ ọrụ azụmahịa ejirila usoro ego dijitalụ. Nke a pụtara na ọ naghị anabata ego ego maka ego. Companylọ ọrụ ahụ nabatara cryptocurrencies ndị a:
Etu esi etinye ego na klọb azụmaahịa
Clublọ Ọrụ Azụmaahịa anaghị anabata nkwụnye ego site na iji ụzọ ntụgharị dịka kaadị debit, PayPal, na Skrill. Kama, ọ na-anabata ego dijitalụ, nke a na-etinyekarị site na obere akpa ndị ọzọ.
Nkwado Ndị Ahịa Azụmaahịa
Nkwado ndị ahịa dị ezigbo mkpa na azụmaahịa niile. Ndị ahịa nwere ajụjụ nwere ike izipu ụlọ ọrụ email ma ọ bụ kpọtụrụ ya site na mgbasa ozi mmekọrịta. Ndị ọrụ nwekwara ike ịgụ nkọwa zuru ezu Ajụjụ Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị (Ajụjụ) N'agbanyeghị nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike imekwu ihe iji melite otu esi agwa ndị ahịa okwu. Dịka ọmụmaatụ, enweghị peeji ịkpọtụrụ. Kama, ọ ga - enyere mmadụ aka degara ha ozi email. Nsogbu ọzọ bụ na Business Club ekwubeghị ebe ọ dabere. Ọ bụ ezie na a na-achịkwa ya na Malta, ndị otu edepụtara na Switzerland. Ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ ahụ dị na Bekee.
Businesslọ Ahịa Ahịa ọ Bụ Ebe Nchebe itinye ego?
Clublọ ọrụ azụmahịa bụ ụlọ ọrụ na-eto eto nke malitere na 2020. Ọ malitere na mmepe kemgbe 2018 na ụzọ map ahụ na-egosi na ọ ga-aga n'ihu na-etolite ruo 2021. Site n'elu, azaghị ọtụtụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ ekwuola banyere ndị guzobere ya, ọ kpọghị aha karịa ebe ọ dị. Ọzọkwa, agbanyeghị mgbanwe BCT, nke pụtara na ire ihe ngosi BCT gị nwere ike isi ike. Ka o sina dị, dị ka ụlọ ọrụ niile na-eto eto, anyị na-akwado ka itinye obere obere ego gị. I kwesiri ighota nsogbu di na ya.
AKWROKWỌ AKW BKWỌ
URL ga saịtị ntanet:
Ego ego Bitcoin,